सुन तस्करीलाई चिट्ठी - रेगीस्थान बाट - Himalay Online Media
सुन तस्करीलाई चिट्ठी – रेगीस्थान बाट
तपाईं ११ औ पटकमा यसपटक तपाईंले नेपाल पठाएको ३४ केजी सुन पक्रिएर ठुलो पीरमार्कामा पर्नु भएकोमा दु:ख ब्यक्त गर्दछु ।
१० औ पटकलगेको सुनको नाफाले अहिलेको घाटा पुर्ती गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । त्यो थोरै कमिसनको लोभमा पक्राउ परेका ३ जना निर्दोश अपराधीहरुलाई पनि छुटाउने जिम्मेवारी तपाईंहरुकै हो जस्तो लाग्दछ । कसरी हुन्छ तिनिहरु त फस्नु भएन नि ? आखिर तपाईंहरु बिचमा शर्त पनि त्यही नै हो । “तिमी सुन लिएर जाउ, यती कमिसन दिन्छु, केही भए मेरो जिम्मा” त पक्कै भनेकै हो । उनिहरुका पनि बाउआमा, श्रीमती, बालबच्चा होलान , उनिहरुको के गल्ती छ र ? आफ्नो बचन चाँही पुरा गर्नै पर्दछ है !
आमा दिदिबहिनीलाई २-४ तोला काँचो सुन लान दिनुहुन्न भन्दै खुशी मनाउनेले ३४ केजी सुन पक्रिएकोमा म जस्तै दु:ख मनाएको खबर छ । हुण्डी र सुण्डी (सुन तस्कर) का डुरे मुसालाई बन्द गरेर राम्रो काम गर्यौ भन्दै जनतालाई ढाट्नेहरु (नेपाल सरकारको ५० ग्राम काँचो सुन लान बन्द गर्ने कर्मचारी) को समर्थनमा फेसबूकमा जुलुस निकाल्नेहरु अहिले चुपचाप छ्न । लाजै बिना “ए हो र, आम्मामा, त्यत्रो हगी, कसको रहेछ” देखी केही अरु केही बोल्दैनन ।
यो पनि तपाईंको पक्षमा हो भन्ने बुझिदिनु होला । समर्थन त तपाईंको बिरोध नगरेर पनि गर्न सकियो नि हैन र ?
सिआबीका डिआईजी नबराज सिलवालले दुबईबाट सुईको पाएर पक्रेको हो भने । केही दिन अघी मात्र सिलवाल र काठमाडौ प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनाल दुबईको भ्रमणमा आएर थिए । सुईको पाउने सुत्र फेला पारेर गएका रहेछन ।
बरु अब यिनिहरुलाई बिदेश घुम्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । अस्ती पनि कसलाई सोधेर आए खोजी गरौ र कारबाहीको लागी सेटिङ शुरु गरौ । यिनिहरुलाई त्यो ठाउँबाट अन्यत्र सरुवा गर्न तिर लाग्नुपर्दछ ।
अनी अर्को कुरा भन्नै बाँकी छ । यसरी पक्रिएको सुनको २५% प्रतिशत सुराकीले पाउने नेपाल सरकारको नियम छ । मतलब झण्डै १४ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको सुनमा साढे ३ करोड रुपैयाँ त सुराकीलाई पुरस्कार सहितको कमिसन पनि आउने भो । त्यो पाउने भाग्यमानी को होला दुबईबाट ? यस्तै पुरस्कारको ब्यवस्था गर्ने हो भने यहाँ धेरै हुण्डी, सुण्डी र भिण्डी (भिजित भिसा) रोकिने पक्का छ । त्यसो त गर्नु भएन नि ? यो सुराकी को रहेछ खोजौ । यसरी तपाईंलाई फसाउन मिल्छ ? तेसिमा नि !
मान्छेहरु भन्छन, देशलाई उँभो लगाउने एउटा सुत्र यो पनि हो रे । देश लुट्ने राष्ट्रबादीहरुको बिगबिगी भईरहेको बेला यो एउटा स्वागत योग्य कदम हो रे । नेताले त्यत्रो देश लुटे केही भएन हामीले यती जाबो ३४ केजी लैजादा कसरी लुट्यो ? भनेर तर्क गर्नुस् म सहयोग गरौला । हात्ती छापे नेताहरुले २-४ बर्षमा कमाएको बङगला चाँही कहाँबाट आयो ? भनेर सोध्नुस् तिनका मुख बन्द हुन्छन । अरु केही परे इनबक्स गर्नुस् म उत्तर दिम्ला तिनिहरुलाई!
दु:खका साथ फेरी पनि भन्छु, तिमीलाई परेको यो ठुलो मर्का मैले महशुस गरेको छु । ब्यापार हो, कहिलेकही यस्तो हुन्छ, फेरी देखी जोगिएर गर्नु । तिम्रो लागि ३४ केजी केही हैन भन्ने हामीलाई लाईराको छ ।
बाहिर नजिकका साथीहरुसँग कुरा गर्दा सिधै भनिदिनुस्, मेरो रौ पनि हल्लिएको छैन । बालै भएन ! म छु नि!
लेखक: रेगिस्तानी मेघराज सापकोटा
बिदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरुलाई श्रम दुतको रुपमा बुझ्न मन्त्रि बिष्टको अपिल।
भूकम्पपिडीतलाई एनआरएनए युएईको दुबई क्षेत्रीय समितीबाट ४ लाख सहयोग
दाङ देउखुरी समाजको साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा पुरी।
मानवअधिकार एलाइन्स काठमाडौ शाखाको छैटौ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न।